China Steel isakhelo inkqubo-ukuziqengqa ukwakha abenzi umatshini kunye nabanikezeli | Zhongtuo
ifreyim Steel inkqubo-ukuziqengqa yakheka umatshini inkqubo isakhelo Steel? Makhe siqale kukwazisa okufutshane benkqubo iintsimbi. ehlelayo Main ezenza yenye iinkqubo iintsimbi. inkqubo Steel but is lemveliso icandelo inkampani, umgca ngokukhethekileyo esongwayo zokubumba, siya- Ukuphendula bakwazi ukuyila kusekwe umgca esongwayo leyo enokumelana neemfuno iinkampani uze uyamkele iimfuno zakho. indawo wethu liya kuqeqesha lwabasebenzi ukunciphisa ukuba iprojekthi yakho ukugqiba apho inciphisa isakwalela ...
Inkqubo isakhelo Steel ?
Makhe siqale kukwazisa okufutshane benkqubo iintsimbi. ehlelayo Main ezenza yenye iinkqubo iintsimbi. inkqubo Steel but is lemveliso icandelo inkampani, umgca ngokukhethekileyo esongwayo zokubumba, siya- Ukuphendula bakwazi ukuyila kusekwe umgca esongwayo leyo enokumelana neemfuno iinkampani uze uyamkele iimfuno zakho. indawo wethu liya kuqeqesha lwabasebenzi ukunciphisa ukuba iprojekthi yakho ukugqiba apho ngokunciphisa ezilahliweyo kunye abasebenzi kakuhle ukunyusa umgangatho. Ngokukhawuleza nje ngokukhawuleza sithatha iimfuno uze ugcine ixesha lakho yenkampani kunye nemali. Thatha le mifanekiso ilandelayo reference wakho ukwazi yintoni kwenziwa iqengqwa kumatshini bokwakha.
Yi le mifanekiso ilandelayo, makhe khangela indlela r imisebenzi ukwakha :
Kwaye ke kaloliwe Umatshini uyila niba uhlobo izileyi ezimbini: mqengqeleki oxwesileyo kunye roller nkqo. Ibonisa umfanekiso ngokulandela izileyi tye inkqubo ye ehlelayo engundoqo umatshini bokwakha ukusebenza.
Umzekelo: C umatshini purline, okanye stud kunye umatshini umkhondo, ngokuqhelekileyo usebenzise kuphela izileyi tye ukuze bakwazi ukugqiba inkqubo onenombolo.
Roller nkqo :
nosaziwayo nkqo ngokuqhelekileyo ngenxa iiprofayili nzima ngathi umatshini wokwenza umbhobho metal, tye yokubeka ukwenza umatshini kunye nabanye. Le mifanekiso ilandelayo ibonisa izileyi nkqo inkqubo esebenza:
Umzekelo Kwisiqingatha umatshini emdaka ngeenxa isebenzisa yokupasa uninzi roller nkqo:
Xa ilizwi, ukuziqengqa iSayensi neThekhinoloji umatshini lo toll ukuba utshintshe ngumcu metal ukuya iprofayili efunekayo:
Kweli nqaku, ebonisa nje ezinye ingqiqo umatshini engundoqo onenombolo bokwakha, ekulandeleni amanqaku, sithetha ngakumbi malunga nendlela yokusebenza ye-ngakumbi isakhelo Steel Mhise umatshini bokwakha.
Previous: Container column indlu yokubeka Umatshini ngokuthimba uguqulelo esinamandla zenza 4.0mm max
Next: ngokuzenzekelayo Ngokupheleleyo Heavy umsebenzi Umatshini purline Stacker ukuba ubukhulu puline ngaphezu 3.0mm
C60-300 Automatic ngokupheleleyo Adjustable C Purline fo ...
Inyathelo weThayile Making Machine , Rolling ezisisivalo Door Roll Ndiyila Ukwenza Imitshini , Metal ubuhle Ndiyila Imitshini , Hg50 Tube Line , Zophahla Sheet Making weThayile Machine, Stud Track Machine,